Apple's Magic Trackpad yepasi pasi pemakumi manomwe euros | Ndinobva mac
Chekutanga kujekesa kuti haisi yechipiri vhezheni yeiyi trackpad, ndicho chizvarwa chekutanga icho nhasi hachisati chatengeswa muchitoro cheApple zviri pamutemo, asi zviri pachena kuti tiri kutarisana nemutengo wakanaka kwazvo wekutanga weApple trackpads. kubvira haina kusvika 70 euros nekutakura kunosanganisirwa kana tiri premium. Chaizvoizvo Apple trackpads yakagara iri iyo sarudzo kune vazhinji vashandisi vasingade iyo Mouse Mouse, asi ikozvino vazhinji nevashandisi varikushandisa iyi trackpad yeMac sezvo iri nyore chaizvo.
Mutengo wakajairika paAmazon ungangoita makumi masere euros saka nemutengo uyu tinochengetedza anenge gumi pamutengo wawo uye trackpad iri nyowani. Svondo rino takaona kuderedzwa kwakakosha paApple's Magic Mouse 80 uye ikozvino tiri kutarisa kuti tione kana yechipiri vhezheni yetrippad yakatangwa panguva imwechete neiyi Mouse nyowani yakadzikiswa zvishoma, asi kwechinguvana kunyangwe ichidhura. haisvike padiki pane yakawanikwa neiyi "yekare" Magic Trackpad.
Misiyano iri pakati peiyi modhi uye itsva modhi, pamusoro pekunge iri yakati kurei muhukuru uye yakapedziswa nechena, ndeyekuti bhatiri rinosanganisirwa mumamodheru matsva kuti rirege kutsamira pamabhatiri maviri ane mhando yapfuura. Kana iwe uchifarira izvi Mashamwari Trackpad Apple yekutanga unogona kuitenga yakananga kubva kune iyi link muchitoro chepamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple's Magic Trackpad yepasi chete makumi manomwe emaeuro
Ndinoitengesa ye € 45 nyowani mu wallapop
MacBook Pro inotambura nekutsva kweiyo Samsung Galaxy Note 7 inonzi isina kukundikana